बालकोटमा सकियो तेश्रो धारका नेताहरु र ओली बीचको बैठक, के-के भयो कुराकानी?
काठमाडौं । नेकपा एमालेले भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकमा माधवकुमार नेपाल समूहसँग रहेका, तर उनको पार्टीमा नगएका नेताहरु पनि सहभागी हुने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष ओलीको निवासमा आज भएको छलफलमा यसअघि कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भोलि मंगलबार नै २०७५ जेठ २ को अवस्थाको एमालेको स्थायी समिति बैठक बोलाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
ओलीसँगको छलफलपछि नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका गोकर्ण विष्टले १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाएको बताए ।
‘भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठकमार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने रुपरेखा तयार गर्छ । आज भएको छलफलमा अध्यक्ष र महासचिव दुवैले १० बुँदेलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो’, विष्टले भने, ‘अहिले नै कुरा मिल्यो भनिहाल्न त मिल्दैन तर सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।’
दश बुँदे कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिने समस्या समाधान गर्न कार्यदलको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । दश बुँदे कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष ओलीलाई मनाउने जिम्मा यसअघि आइतबारको छलफलमै शंकर पोखरेलले लिएका थिए । कार्यदलमा रहेका माधवपक्षीय नेताहरूको सहमतिमै कार्यसूची बनाएर अध्यक्ष र महासचिवले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नेता पोखरेलले बताएका छन् ।
दश बुँदे सहमतिको मुख्य स्पिरिट नेकपाकालमा समेटिएका नेताहरूसहित २०७५ जेठ २ अघिका एमालेका संरचनाहरू क्रियाशील गराउने र जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ कार्यदलले टुंगो लगाउने उनले बताए । त्यसबाहेक विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा माधव नेपाल छाडेर आउनेहरूका समेत सरोकार सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी संस्थापन पक्षको छ ।
माधव नेपालको पार्टीमा नजानेहरू जेठ २ अघि जुन पदमा थिए त्यही पदमा रहने सहमति भएको छ । माधव नेपाल पक्षका ३० भन्दा बढी जिल्ला अध्यक्ष थिए । नेपालसँग नजानेहरूले अब जेठ २ अघिकै कमिटीको बैठक बोलाएर पार्टी गतिविधि अघि बढाउन पाउने गरी मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ ।
१० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयनलगायतका विषयमा पनि सहमतिनजिक पुगेको छ । तर, ओलीले अब गुटका आधारमा डिल नहुने बताएका छन् ।
‘निर्णायक वार्ता’मा ओलीलाई अष्टलक्ष्मीले भनिन्– ‘मूल नेतृत्व तपाईं नै हो, साथ दिन तयार छौं’- हालै बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरूको मूल नेतृत्व ओली नै भएको बताइन् । आफूहरूको साथ ओलीलाई नै रहने उनको भनाइ थियो ।
‘मूल नेतृत्व तपाईं हो । समस्या समाधान गर्न तपाईं नै लाग्नुपर्छ । त्यसमा साथ दिन तयार नै छौं । साथ दिन तयार नभएको भए त हामी पनि कता कता जान्थ्यौं । आ–आफ्नो ढंगले हिँड्थ्यौ । हामी त गएका छैनौँ नि !’
नेतृत्वले नै पार्टी जोगाउने र बचाउन सक्ने भएकाले अहिले ओलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने शाक्यले बताइन् । ‘नेतृत्वले राम्रो पनि गर्न सक्छ, नराम्रो पनि गर्न सक्छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजान पनि सक्छ । मूल नेतृत्व भनेको तपाईं हो । हामी पनि हो । हामी सबै हिसाबले साथ दिन्छौं । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ढिक्का भएर एमालेले मात्रै बचाउन सक्छ, भन्ने सन्देश दिएर जुर्मुराएर उठौं ।’
बालकोट पुगेका नेताहरूसँग ओलीले भोलि नै बैठक बसेर १० बुँदे कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । शाक्यले ओलीले बैठक बसेर छलफल अगाडि बढाऔं भनेको कुरा सकरात्मक भएको बताइन् । छलफलमा उनले भनिन्, ‘कमरेडले भोलि नै बैठक बसौं न त भन्नुभयो । मलाई त राम्रो लाग्यो । राम्रो कामका लागि किन ढिला गर्ने ? यसले एमाले एकताबद्ध भयो भन्ने सन्देश जान्छ ।’
विगतमा कसले के गर्‍यो भन्ने कुरा बिर्सेर पार्टी जोगाउनु पर्ने शाक्यको भनाइ थियो । ‘हिजो कहाँ के–के भयो सबै छाड्दिनुहोस् । त्यता जाँदा फेरि पनि घाउ बल्झिन्छ, त्यता नजाँदा नै राम्रो हुन्छ’, उनले भनिन् ।माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउन हतार गरेको शाक्यले बताइन् ।
‘माधव नेपाल यति छिटो नजानुपर्ने हो । हामी त पर्खेका छौं । युवाहरू पर्खेका छन् । माधव नेपाललाई ल्याउनैपर्छ, एकताबद्ध बनाउनैपर्छ । वामदेव गौतम अस्तिको बैठकमा आउनुभयो भन्ने छ । झलनाथ कमरेड बिरामी हुनुहुन्छ । जो–जो नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै एकताबद्ध भएर जुरूक्क उठ्नुपर्छ’, छलफलमा शाक्यले भनिन् ।
पार्टी फुट्दा केही फरक पर्दैन भन्ने सोच नराख्न पनि शाक्यले ओलीलाई आग्रह गरिन् । ‘हामी फुट्यौँ भने केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा होइन, मुलुकचाहिँ सिद्धिन्छ । यो टीमले एमाले जोगाउनै पर्छ, बलियो बनाउनै पर्छ । त्यसका लागि मनलाई संकुचित, साँघुरो होइन, फराकिलो बनाउनु पर्छ । मिल्ने भनेपछि अत्यन्तै लचिलो, फराकिलो भएर मिल्ने कुरातिर जाऔं ।’
विभाजन भएर, मन साँघुरो गरेर, पार्टी बेमेल भएर जनतामा जाँदा कस्तो असर हुन्छ भन्ने कुरा बताउन शाक्यले सहाना प्रधानसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दाको अनुभव छलफलमा सुनाएकी थिइन् ।
‘२०५४ सालमा साहना प्रधानले पार्टी फुटाइसकेपछि सहाना प्रधानकै क्षेत्रमा उनलाई हराउनुपर्छ भनेर मलाई पठाइएको थियो । त्यसबेला जनताबाट मैले कस्तोसम्म सुन्नपर्‍यो भन्ने अहिले पनि झलझली सम्झन्छु । जनताको घर घर गएर म पार्टी एकता बचाउँछु भन्नुपर्‍यो । फूटलाई जनताले कहिल्यै मन पराउँदैनन्’, शाक्यले सुनाइन् । छलफलमा उनले बागमती प्रदेश सरकारको अनुभव पनि सुनाइएकी थिइन् ।